Apple Watch moyo rate ziviso inoshanda uye kuratidza kumusoro muNFL mitambo | Ndinobva mac
Apple ine mukutarisa kwekambani maitiro ekuzivisa vashandisi kuti vangave vaine dambudziko remwoyo nekuda kweiyo sensor iyo inosanganisirwa. Zvakanaka, zvinokwanisika kuti kana iwe uchiona mutambo wenhabvu kana imwe mhando yemitambo inokwanisa kugadzirisa yako kurova kwemoyo kusvika pamakumi maviri nemaviri kurova paminiti mushure mekuita anopfuura maminetsi gumi pasina kufamba, alarm inorira.
Zvirinani ndizvo zvakaitika kune vashoma vateveri vemutambo wakanaka muUnited States, American Soccer League, maMinnesota Vikings akarwira kukunda. Iyo alarm yekukwanisa kurwisa kwemoyo kana dambudziko remwoyo rakasvetuka mune akati wandei avo mushure mekubata-pasi mumutambo uyu wekufungidzira kune vese avo vaive vakapfeka Apple Watch.
Kana moyo wako uchinge wakamira pamusoro peimwe nhamba yekurova paminiti (BPM) paunoita kunge usina basa kwemaminitsi gumi, yako Apple Watch inokuzivisa. Unogona batidza ziviso yemoyo Paunovhura iyo Heart Rate app kana kune chero imwe nguva, yeizvi isu tinofanirwa ku:
Vhura iyo Apple Watch app pane iyo iPhone.
Tinya iyo Yangu yekutarira tebhu, wobva wadzvanya Moyo rate.
Dhinda Yakawedzera moyo yemwoyo uye sarudza BPM.
Jekesa kuti Notices dzepamoyo dzinongowanikwa pane iyo Apple Watch Series 1 kana gare gare.
«Apple Watch yakanditumira ichi chiziviso nekukurumidza mushure mekuburitswa pa t… https://t.co/vTLvazboBu #vikings pic.twitter.com/P3LwEHdJEl
- Vikings Nyanga (@MinnVikingsHorn) November 26 we2017
My #AppleWatch Kuchengeta ziso kwandiri pakupera kweizvozvo #Vikings mutambo. Nyevero mbiri. pic.twitter.com/r2ynJEtX9b
- Mike Van (@mikethefifth) January 15 we2018
Chiziviso chakakosha cheApple Watch
Izvi zvinotiratidza kuti mudziyo weApple uyu unogona kuponesa hupenyu kana mushandisi anoupfeka achiziva kuti vanogona kuve nedambudziko kana vakasazorora. Ichokwadi ndechekuti kuve nekurova zana nemakumi paminiti paunenge wakamira chinhu chisingawanzoitika, saka kuve neApple Watch inokwanisa kutizivisa nezvazvo nguva dzose chinhu chakanaka. Ndinovimba vese zvavo vanofara uye vanoramba vachiona bhora asi zvakadzikama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Tarisa moyo rate ziviso inoshanda uye kuratidza kumusoro muNFL mitambo
Zviyeuchidzo zveBREATH application zvinondikundikana, ini ndinoridza 6 kana 7 zviyeuchidzo uye hazvindinyevere kamwe kana dzimwe nguva nenzira yechipupuriro. Ini handioni chikonzero, kana kuzviwana muApple, pandakafona kuti ndizivise isu takaita bvunzo dzakawanda senge kutangazve wachi, kuchinja ruoko, kudzoreredza iyo iPhone wachi app, nezvimwe. Iyo iPhone neWatch software zvasvika pari zvino. Kana zvikaitika kune mumwe munhu, ndingafarire kana iwe uchikwanisa kuzvitaura.
Chokwadi! zviri kuitika kwandiri tichaonawo kana paine mhinduro uye tichazviparadzira. Une Series 0?
kwaziso nekutenda nekuda kwemashoko Bartomeu!
Mhoroi, ndanga ndiine vese vatatu. Iine akateedzana 2 zvakaitika kwandiri uye zvino zvinoitika kwandiri neakateedzana 3.
Ndine urombo, iri / ini ndiri Bartomeu
Mukutsanangurwa kweApple mashandisiro Ekushandisa Iyo App: Shandisa iyo Kufema app - Apple Tsigiro, inoti:
“Kana chiyeuchidzo chichienderana nechakaitika pakarenda, sekugadzwa, uri kuenda kana kuita maekisesaizi, kana kuti watanga musangano wega, Apple Watch yako inogadzirisa chiyeuchidzo. "Muchagamuchira chiyeuchidzo nguva pfupi chiitiko chapera kana pamunomira kufamba."
Naizvozvo, zviyeuchidzo kana zviziviso zvakamiswa kana zvakarongwa zvinofanirwa kuzadzikiswa. Ndisati ndazvizadzisa. Rimwe dambudziko rinofanira kuitika, ndinofungidzira kubva pasoftware.
Mhinduro yaApple nhasi:
Ndatenda nekutaura neApple.
Mushure mekubvunza timu yeinjiniya, simbisa kuti iri pamusoro pechinetso chakabatana neApple uye kuti iri mune yekuvandudza ichagadzirisa dambudziko racho zvakajeka
Nehurombo, kune mateix kwave paine zvinopfuura zvakakwana kuti zviitire mateix, saka hapana chekumirira.
Chero zvazvingaitika, ini ndicharamba ndichiteerera qualsevol novetat al respect i t'ho inozozivisa se aviat com pugui.
HomePod inosvika sekunge musika unotanga kutora steam, kudzidza kunowana